नियन्त्रणमा आएन टाइफाइडः बिरामी बढ्दै, औषधि घट्दै « Dainiki
नियन्त्रणमा आएन टाइफाइडः बिरामी बढ्दै, औषधि घट्दै
२६ असार, डाेल्पा । डोल्पामा एक साताअघि शुरु भएको टाइफाइडको प्रकोप नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । जिल्ला अस्पतालमा बिरामी चाप बड्न थालेपछि टाइफाइड नियन्त्रणमा आउन नसकेको हो । बिरामीको चाप बडेपछि १५ श्ययाको जिल्ला अस्पतालमा २५ जना बिरामीले उपचार गराइरहेको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ । केही दिन अगाडि मात्रै २१ जना बिरामीले बेडमै उपचार गराइरहेका थिए ।
दैनिक उपचार गराउन आएका चारदेखि पाँच जना बिरामीमध्ये दुईदेखि तीन जनालाई बेडमै राखेर उपचार गराउनुपर्ने अवस्था देखिएको अस्पतालले जनाएको छ । बिरामी हुनेमा अधिकांश ठूलीभेरी नगरपालिका वडा नं २ र ३ का सर्वसाधारण रहेका छन् ।
अस्पतालमा पर्याप्त बेड नहुँदा १५ जनालाई बेडमा र १० जनालाई भुइँमै राखेर उपचार गराइरहेको डाक्टर सिजन रावलले जानकारी दिनुभयो । बेड नहुँदा जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत अस्पताल क्वाटरमा बस्दै आएका स्वास्थकर्मीको बेड ल्याएर उपचार गराइरहको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रकोप नियन्त्रणका लागि प्रदेश र केन्द्रमा समेत जानकारी गराइसकिएको डा रावलले बताउनुभयो । दिनहुँ बिरामी बड्दै गए टाइफाइडले ठूलो रुप लिनसक्ने खतरा रहेको बताउँदै रोकथामका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार गम्भीर हुनुपर्ने डा रावलको भनाइ छ । तीन दिनदेखि जहाज नआएपछि प्रदेश सरकारले पठाएको औषधि नेपालगञ्जमै रोकिएको छ । बिरामीको चाप बड्दै गएकाले औषधि भने सकिन थालेको जिल्ला अस्पताल डोल्पाले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति : २६ असार २०७६, बिहीबार १८:०१
काठमाडौँ नेचुरोपेथी अस्पताल सञ्चालनमा, शल्यक्रिया र औषधिबिना नै उपचार गरिने
४ कात्तिक, काठमाडौँ । योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सेवा दिने उद्देश्यले यहाँ ‘काठमाडौँ नेचुरोपेथी अस्पताल’
स्वास्थ्य सचिव डा.पुष्पा चौधरीद्वारा राजीनामा
४ कात्तिक, काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी सचिव डा. पुष्पा चौधरीले सचिव पदबाट राजीनामा
– प्रकाश सिलवाल २ कात्तिक, काठमाडौँ । जन्मँदै दुवै अण्डकोष पेटभित्र भएका ११ वर्षीय प्रसङ्ग
राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम भोलि र पर्सी, आफ्नो बालबालिकालाई नछुटाई खुवाउनुस
१ कात्तिक, काठमाडाैँ । राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी पूरा भएको स्वास्थ्य तथा
गोरखापत्रका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारी रिपोर्टरको कोटामा राष्ट्रपतिसँगै विदेश
तीन वर्षदेखि इलाका प्रशासन बन्द, स्थानिय बासिन्दा मारमा
पुनःनिर्माणले नछोएका ८३ विद्यालय, विद्यार्थी अस्थायी छाप्रोमा पढ्न बाध्य
अनेरास्ववियु पर्वतका पूर्व अध्यक्ष एवं नेकपाका नेता ढाकाराम सुवेदीको अल्पायुमै निधन
मानवअधिकार प्रतिवेदनको सन्देशः नैतिकताको आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक खनालको राजिनामा !
नागढुंगा सुरूङविरूद्ध भ्रम छर्दै कांग्रेस नेता महत, जनतालाई भेडाँबाख्रा सम्झिन्छन किन ?
यौन दूर्व्यवहारको आरोप लागेका नेकपाका अर्का नेता देवेन्द्र पौडेल महराको बचाउमा
कांग्रेस नेता आलमले पोलिग्राफ टेस्ट दिन मानेनन्, घटनामा प्रयोग भएको ट्याक्टर पनि भेटियो